RABE SY NY FIARA KARETSAKA
Rabe dia mpitondra taxi no asany ary indray andro dia niainga izy mba handeha hanao ny asany toy ny fanaony andavanandro. Novelomina ny fiara ary nandeha nitety tanana sy nijanona tamin’ny toerana fiantsonan’ny fiara karetsaka. Indrisy anefa fa hariva ihany ny andro, tsy nisy na dia iray aza nanakana sy nanontany azy tontolo andro. Vizana sy rera-maina izy tamin’ny ezaka rehetra nataony iray andro manontolo. Nojerena ny fatiantoka ka nahatratra efa ho roa alina ny lasantsy lany nivezivezena tao anatin’izay indray andro izay. Nody Rabe ary andeha hampiditra ny fiarany teo amin’ny garage fitoerany, akory ny hatairany fa hay hadinony ny nametraka ilay soratra teo ambony fiara manao hoe TAXI. ary izay no antony tsy nisakan’ny olona azy sy tsy nanantonan’ny olona azy tontolo andro.
Rehefa misy zavatra hadino de tsarovy fa tsy maintsy misy fahabangana hatrany ny fiainana
Ry Kristiana oh! Tandremo ny manadino ny fiarahana amin’Andriamanitra fa mitondra fatiantoka ho anao toa ny nanjo an’I Rabe. Matetika hodiantsika tsy hita Andriamanitra na minia manadino Azy mihintsy isika mba hanaovantsika ny sitrapontsika. Tsqarovy fa fatiantoka hatrany ny fanadinoana Azy. Nefa Izy tsy mba manadino antsika izany mihintsy
« Fa raha manadino an’i Jehovah Andriamanitrao mihitsy ianao ka manaraka izay andriamani-kafa sady manompo azy sy miankohoka eo anatrehany, dia milaza aminareo marimarina aho fa haringana tokoa ianareo: » (Deotoronomia 8:19)
« Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin’ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, Fa Izaho kosa tsy mba manadino anao hoy Jehovah » (Isaia 49:15)